WARBIXIN: Xiddigihii Uu Lasoo Saxeexday, Qaabkii Uu Barca U Dhisay, Lacagihii Uu Bixiyey Iyo Milicsiga Sannadihii Hore Ee Joan Laporta | Laacibnet.net
HomeSuuqa Kala IibsigaWARBIXIN: Xiddigihii Uu Lasoo Saxeexday, Qaabkii Uu Barca U Dhisay, Lacagihii Uu Bixiyey Iyo Milicsiga Sannadihii Hore Ee Joan Laporta
WARBIXIN: Xiddigihii Uu Lasoo Saxeexday, Qaabkii Uu Barca U Dhisay, Lacagihii Uu Bixiyey Iyo Milicsiga Sannadihii Hore Ee Joan Laporta
March 9, 2021 Abdiwahab Ahmed
Joan Laporta ayaa noqday madaxweynaha Barcelona markiisii u horreysay June 15, 2003. Iyadoo ay da’diisu ahayd 40 sannadood oo kaliya, waxa uu doorashadii waqtigaas dhacday ka helay 52.57 boqolkiiba codadkii la dhiibtay, laakiin markiiba waxa uu muujiyey in uu u qalmayay in la siiyo kalsoonida intaas le’eg
18 sannadood kaddib ayaa Laporta mar labaad loo doortay Madaxweynaha Barcelona, waxaanay taageereyaashu ka rajaynayaan in sidii doorkii hore oo kale uu kooxda u dhiso, guulo badanna u gaadhsiiyo.
Iyadoo la filayo in la arko magacyada cusub ee mashruuciisan qaybta ka noqonaya, waxa aanu dib u milicsanaynaa qaabkii uu markii hore kooxda u dhisay, gaar ahaan, sidii uu suuqa u galay ee uu ciyaartoyda ugala soo wareegay laga soo bilaabo xilli ciyaareedkiisii ugu horreeyey ee uu xilka qabtay.
Barcelona ayaa lasoo saxeexatay xiddiga reer Brazil ee Ronaldinho kaddib markii ay awoodi waayeen inay lasoo wareegaan David Beckham oo ay Real Madrid kaga guuleysatay. 32.5 milyan oo Euro ayuu Laporta u shubay PSG oo uu kasoo qaatay Ronaldinho. Saxeexan ayuu ahaa midka beddelay taariikhda kooxda. Waxa kale oo isla sannadkaas ay lasoo wareegeen Rafael Marquez oo ay kasoo bixiyeen 5.3 milyan oo Euro, Ricardo Quaresma oo 6.4 milyan oo Euro ka bixiyeen, Giovanni van Bronckhorst, Rustu Recber iyo Mario oo intuba si bilaash ah ugu soo biiray kooxda.
Xilli ciyaareedkii xigay ayay si dhab ah isku beddeshay kooxdu, waxaanay lasoo saxeexdeen Samuel Eto’o oo 27 milyan oo Euro ay kaga soo qaateen Real Mallorca kaddib markii ay Real Madrid samaysay qalad taariikhda galay oo Florentino Perez uu iska diiday inuu dib ula soo saxeexdo Eto’o sidii uu dhigayay heshiiskii uu hore ugaga iibiyey Real Mallorca. Waxa kale oo xilli ciyaareedkaas ay lasoo saxeexdeen xiddigaha Deco (21m euros), Edmilson (8m euros), Ludovic Giuly (7m euros), Maxi Lopez (6.5m euros) iyo Sylvinho (1.5m euros), halka Albertini iyo Henrik Larsson ay si bilaash ah ugu soo wareegeen.
Sannadkan waxay Barcelona waxay ilaashatay qasnaddeeda mana samaynin saxeexyo ay lacag kasoo bixiyeen. Mark van Bommel oo si bilaash ah ugaga yimid PSV Eindhoven iyo Santiago Esquerro oo isaguna xor ahaa ayaa kaliya kusoo kordhay.
Saddex saxeex oo kaliya ayay sannadkan samaysay Barcelona si ay usii xoojiso safkeedii ku guuleystay Champions League. Gianluca Zambrotta ayay kusoo iibsadeen 14 milyan oo Euro, Eidur Gudjohnsen ayay Chelsea kaga soo qaateen 12 milyan oo Euro, halka halyeygii difaaca Faransiiska ee Lillian Thuram uu 5 milyan oo Euro ugu yimid.
Laporta ayaa qasnaddiisa u jabiyey saxeexyo cusub, si uu u firfircoonaysiiyo kooxdiisa ka hor intii aanu bilaabmin xilli ciyaareedka 2007/08. Xiddiga ugu weyn ee ay lasoo saxeexdeen wuxuu ahaa Thierry Henry oo 24 milyan oo Euro ay kaga soo qaateen Arsenal. Waxa kale oo ay lasoo wareegeen Gabriel Milito (20m euros), Eric Abidal (15m euros), Yaya Toure (9m euros) iyo Jose Manuel Pinto oo 500,000 euro ay kasoo bixiyeen.
Barcelona waxay sii wadday inay kharash garayso lacag, waxaana xilli ciyaareedkan yimid dhawr saxeex oo muhiim ah oo qayb ka noqday taariikhda kooxda. Dani Alves ayay 41.5 milyan oo Euro kaga soo qaateen Sevilla, waxa usoo laabtay Gerard Pique oo kulliyadooda kasoo baxay, isla markaana ay 5 milyan oo Euro kaga soo ceshadeen Manchester United. Waxa kale oo u yimid Seydou Keita oo ay 14 milyan oo Euro ka shubeen. Saddex ciyaartoy oo fashilmay ayaa iyaguna yimid sannadkaas, waana Alexander Hleb oo 17 milyan oo Euro ay kusoo qaateen, Martin Caceres oo 16.5 milyan oo Euro ku taagnaa iyo Henrique oo 8 milyan ay ka bixiyeen.
Sannadkii ugu dambeeyey ee madaxweynenimada Laporta, waxa uu lasoo saxeexday Zlatan Ibrahimovic oo uu ku yimid heshiis ku kacay 70 milyan oo Euro. Waxa kale oo 25 milyan oo Euro ay kula soo wareegeen xiddigii fashilmay ee Dmytro Chygrynskiy, 14 milayn oo ay kooxda Palmeira kaga soo qaateen da’yarkii waqtigaas mucjisada lagu tilmaamayay ee Keirrison laakiin aan ciyaarta kaliya u safanin kooxda waaweyn ee Barcelona. Maxwell ayay 4.5 milyan oo Euro ka dhiibeen.
Maalmo ka hor intii aanu jagada bannaynin, Laporta ayaa lasoo wareegay David Villa oo 40 milyan oo Euro uu kasoo bixiyey, waxaase midhihii laacibkan goostay madaxweynihii beddelay ee Sandro Rosell.
Real Madrid, Barca Mise Atletico - Kooxdii Toddobaad Oo Maanta Ka Baxaysa Tartanka Super League
RASMI: European Super League Oo Warbixin Soo Saartay Ka Dib Markii Ay Kooxihii Premier League Ka Wada Carareen